एकताबारे मेरो बिचार | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more एकताबारे मेरो बिचार
एकताबारे मेरो बिचार
फागुन ४ गते, २०७४ - १८:५४
एमालेको जबजमा कहाँ बल प्रयोगको सिद्धान्त नमान्नु भनेको छ ? शान्तिपुर्ण आन्दोलन मात्र कहाँ भनेको छ ? कहाँ संघियताको परिकल्पना गरेको छ ? धर्म निरपेक्षताको कुरा गर्यो कि सबै धर्मलाइ समान व्यवहार मात्र भन्यो र समानुपातिक समाबेशितालाइ कसरी अख्तियार गर्यो र वर्ग संघर्ष लाई छोडनु कहाँ भनेको छ ?
अनि जे निर्णय अहिलेको एमालेले गर्छ त्यही जबज भन्न मिल्छ र ? अहिलेको व्यवस्था जबज ले ल्याएको हो कि २१ औ शताब्दीको नौलो जनवाद ले ल्याएको हो ? के प्रचण्डले नेतृत्व गरेको आन्दोलन नभएको भए यतिनै बेला यो व्यवस्था सम्भव थियो ?
के हजारौं नेपाली आमाका छोराछोरी जीवन उत्सर्ग गर्न तयार नभैदिएकाे भए यो परिवर्तन शान्तिपुर्ण तरिकाले भएको हो त ? सबै कुरा २१ औ शताब्दीको नौलो जनवादका हुनु पर्ने, नेतृत्व अर्काको कसरी सम्भव छ ?
चुनावी प्रतिस्पर्धालाई मात्र जबज भनेको हो त ? यी बिषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । अहिलेको कुरा गरौं, के एमालेलाइ माओवादीले सहयोग नगरी ठुलो दल भएको हो त ? ६० र ४० को भाग बण्डामा को ठुलो हुन्छ ? नेपालको ठुलो दल माओवादी भएकाे होइन ?
एमाले तेस्रो भएको होइन र सबै कुरा सम्झौताले मात्र भएको हो । दम्भले के हुन्छ माओवादीले भोगी सकेको छ । एमालेको नेतृत्व संयमित हुन जरुरी छ । प्रचण्ड व्यक्ति नभै लाइन भैसक्यो । देश र जनताको निम्ति जस्तो सुकै निर्णय गर्न छुट भएको संस्था हो प्रचण्ड । प्रचण्डको घुम्न सक्ने जस्तो क्षमता अहिलेको समकालीन नेताहरूमा छैन । सबै जिम्मेवार बनौ ।
एकताको कुरा जनताले अनुमोदन गरेको कुरा हो । यस बाट पछि हट्नेलाई जनताले छोड्ने छैनन् । कमजोरिको कुरा गर्न थाल्दा एकता हुदैन त्यसैले नगरौ । एकताको पक्षमा कुरा गरौ । अरुलाइ हेपेर सम्झौता हुन सक्दैन । पार्टीमा ५० र ५० को हिस्सा गरिनु पर्छ । धेरै नुग्दा भाचिन सक्छ । तन्काउदा चुडिन सक्छ । एकता अहिलेको आवस्यकता हाे । ससम्मान एकता जनताको आशा र भरोसा ।
लेखक : नेकपा माओवादी केन्द्र, बर्दियाका नेता हुन् ।
फागुन ४ गते, २०७४ - १८:५४ मा प्रकाशित